Inona ny voninahitr’Andriamanitra?
“Fa Andriamanitra izay nandidy hoe: Aoka ny mazava hahazava ao amin’ny maizina, no nampahazava ny fonay ho amin’ny fhazavan’ny fahalalana ny voninahitr’Andriamanitra eo amin’ny tavan’i Jesosy Kristy. “ 2 Kôr. 4:6
Ny voninahitr’Andriamanitra dia ao amin’ny toetrany. Raha teny an-tendrombohitra i Mosesy, ka nanao fanelanelanana mafana tamin’Andriamanitra, dia nivavaka hoe: “Mba ampahitao ny voninahitrao aho”. Dia namaly Andriamanitra hoe; “ Izaho hampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran’ i Jehovah eo anatrehanao; fa hiantra izay izay hiantrako Aho, ary hamindra fo amin’izay hamindrako fo” – ny Toetrany – dia naseho araka izany : “Ary Jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe : Jehovah, Jehovah, Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sady be famindram-po sy fahamarinana , mitahiry famindrampo ho an’ny olona arivo mandimby , mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka” Eks. 33:18, 19;34:6,7
Naseho tao amin’ny fiainan’i Kristy io toetra io. Mba hahafahany manameloka ny fahotana ao amin’ny nofo amin’ny alalan’ny ohatra nasehony, dia nentiny teo amin’ny Tenany ny fanahafana ny nofo feno ota. Naneho hatrany ny toetran’Andriamanitra Izy; ary naneho tsy nisy fitsaharany io toetra io tamin’izao tontolo izao.
Maniry ny mpanara-dia azy mba haneho ireo toetra ireo eo amin’ny fiainany koa i Kristy. Tao amin’ny vavaka fanelanelanana ho an’ny mpianany dia hoy Izy hoe: “Ary nomeko azy ny voninahitra (toetra) izay nomenao Ahy, mba ho iray izy, tahaka ny maha iray Antsika; Izaho ao aminy, ary Ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatr’izao tontolo izao fa Ianao efa naniraka Ahy sady efa tia azy tahaka ny nitiavanao Ahy” Jao. 17:22,23
Ankehitriny dia mbola tanjony ihany ny hanamasina sy hanasa ny fiangonany “(...) mba horaisiny ho an’ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentimpentina , na fikentronana, na izay toy izany (..)” Efes. 5:26,27. Tsy misy fanomezana lehibe kokoa mihoatra ilay toetra izay nasehony , azon’i Kristy nangatahina tamin’ny Rainy mba homena an’ireo izay mino Azy. Akory ny halehibehin’ny fangatahana nataony! Fahasoavana feno manao ahoana no hananan’ny mpanara-dia tsirairay an’i Kristy tombontsoa mba horaisina! (...) Endrey! Raha mba ankasitrahantsika amin’ny fahafenoany mantsy ny voninahitra izay nankinin’i Kristy amintsika! Amin’ny fitondrana ny ziogany sy ny fianarana Aminy, dia tonga manahaka Azy amin’ny fanandratana, fahalemem-panahy sy fahamorana, amin’ny hanitry ny toetra.